Dowladda Uganda oo qoranaysa Ciiddan khibrad leh oo loo soo diri doono Somalia – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
By Radio Dalsan Reporter	 On Jun 26, 2019
Afhayeenka Ciiddanka Uganda, Richard Karemire ayaa sheegay inay qoranayaan 1,500 oo ka mid ah Ciiddankii hore ee khibradda lahaa ee dalkaasi oo caafimaad ahaan iyo jir ahaan wanaagsan, si ay qeyb ugu biiraan Ciiddanka Uganda ee qeybta ka ha Hawlgalka AMISOM.
Afhayeenka oo la hadlay Shabakadda Wararka ee SoftPower News ayaa sheegay inay garwaaqsadeen inay dib u qortaan Ciiddankii Khibradda Milliteri ah, kuwaasi oo uu sheegya inay ku dheer tahay Waddaniyadda, waa sida uu hadalka u dhigay.
Waxa kale oo uu sheegay inay daad-gureyntooda weli ku jirto qorshaha Tubta AMISOM ee lagu taageerayo Xilliga Kala-guurka ee ay AMISOM kaga soo bixi doonaan Somalia sannadka 2021-ka.
Mar wax laga weydiiyey habka qorista Ciiddankii hore, waxa uu tilmaamay inay shaacin doonaan, isla markaana aysan wax sir ahayn.
Waxa kale oo uu tilmaamay inay Somalia haatan ka joogaan qiyaastii 29 Kooxaha dagaalama (Battel Groups), kuwaasi oo qaarkood markii 3-aad loo diray Hawlgalka AMISOM.
Ciiddanka Khibradda leh ee Uganda u soo diri doonto Somalia waxaa la sheegay inuu midkiiba mushaar ahaan bishiiba u qaadan doono lacag dhan 1,083 Dollar, wuxuuna Afhayeenka Ciiddanka Uganda sheegay in loo kordhin doono Mushaarka, haddii ay muddo dheer sii joogaan Somalia.
Balse, Ciiddanka kale ee Uganda ee haatan ku sugan Somalia waxay mushaar ahaan bishii u qaataan 722 Dollar.
Dhinaca kale, Afhayeenka Ciiddanka Uganda, Richard Karemire waxa uu tilmaamay inay Ciiddankaii hore ee Kaydka ee dalkaasi horey uga mid noqdeen Ciiddankii Uganda ee lo soo diray Somalia muddadii u dhexeysay sannadihii 2011-kii ilaa 2014-kii.
Si kastaba ha ahaatee, Ciiddanka cusub ee ay Uganda sheegtay inay ku taageerayso Hawlgalka AMISOM waxa uu ku soo beegmay iyadoo ay Golaha Ammaanka ee QM horey u go’aamiyeen qorshe lagu dhimayo tirada Ciiddanka Hawlgalka AMISOM.
Waddanka Uganda waa dalkii ugu horreeyey ee Ciiddamo u soo diray Somalia sannadkii 2007-dii, waana dalka ay ciiddamadda ugu badan ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM